Manomboka maty ny Radio FM, mpisava lalana i Norvezy amin'ny fanapahana entona | Vaovao momba ny gadget
Mihena ny isan'ny mpijery ao amin'ny radio FM. Na eo aza ny zava-drehetra, dia fitaovam-pifandraisana izay toa saika ilaina tokoa, na izany aza, noho izany dia mitazona ny radio AM hatrany isika, mety hieritreritra isika. Noravin'i Norvezy ho mpisava lalana amin'ny fanapahana ny radio FM, nanomboka tamin'ny fizotrany dingana izay haharitra mandritra ny taona 2017 io. Dingana iray saika tsy maintsy arahin'ireo firenena hafa ao amin'ny Vondrona eropeana, satria efa mihabetsaka ny radio nomerika, ary tsy ho ela dia ho lasa haino aman-jery radio azontsika hararaotina ihany.
Tany Norvezy dia nanomboka tamin'ny faritany Nordland, any avaratry ny firenena izy ireo, izay namongorana ny fampielezam-peo amin'ny radio FM ary tsy afaka mihaino afa-tsy ny fandaharana nalefa tamin'ny alàlan'ny radio nomerika. Ity radio nomerika ity dia mety kokoa amin'ny famoahana sy ny atiny famantarana, izay hampiakatra be ny hetsika, ankoatry ny tombontsoa maro azontsika fantarina. Amin'izany fomba izany, any Norvezy dia tsy hanavao ny fametrahana radio FM taloha intsony izy ireo ary afaka soloina rafitra radio nomerika mahomby kokoa, ary ambonin'izany rehetra izany, amin'ny fanjifana angovo ambany noho ny natolotry ny onjam-peo FM.
Isaky ny manapaka fifandraisana bebe kokoa amin'ny vanim-potoana analog isika ary akaiky kokoa ny fahatongavan'ny vanim-potoana niomerika tanteraka. Zava-dehibe ara-toekarena io fanovana io, ary io onjam-peo nomerika io aseho hatramin'ny valo heny mora vidy kokoa ny hitazomana sy hamoahana noho ny radio FM (araka ny filazan'ny governemanta norveziana). Na izany aza, manao veloma ny olona an'arivony mpandray radio FM izay hijanona tsy hiasa intsony izahay, na izany aza, nanome fe-potoana lehibe ny governemanta norveziana, fepetra fampiroboroboana izany hatramin'ny 2015, na eo aza ny vidin'ny sofina kely mponina. Ny firenena manaraka hanambara ny famaranana ny radio FM dia i Soisa, izay handao azy amin'ny 2020.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Manomboka maty ny FM Radio, mpisava lalana amin'ny fanapahana entona entona i Norvezy
Gemma Lopez dia hoy izy:
Veloma amin'ny radio transistor nandova ny raibeko nandreraka ahy ???
Rodrigo Heredia dia hoy izy:
Raha efa antitra io dia tsy ho FM, tsy maintsy AM.
Valiny tamin'i Rodrigo Heredia
Nohavaozina tamin'ny vaovao mahaliana ny Facebook